तपाईसँग समस्या छ? हामीलाई सहयोग गर्न सक्ने सबै भन्दा राम्रो सहयोग गरौं। तपाईं यो FAQ मा जवाफ पाउन सक्नुहुन्छ सूची र यदि तपाईं खोज्नु भएको छ भने, हामीलाई समर्थन @timeteccloud.com मा ईमेल गर्नुहोस् र हामी त्यहाँ त्यहाँ त्यहाँ हुनेछौं।
समयसमय र समय समायोजनमा Tec TA
9. के टाइमटेक एप र वेब बीच डेटा सिङ्क तुरुन्तै हुन्छ?
10. के मलाई टाइमटेक अनुप्रयोग किन्न चाहन्छ वा यसको कुनै पनि इन-एप खरीद छ?
TimeTec एप आईओएस र GooglePlay बाट निःशुल्क स्थापित गर्न सकिन्छ तर तपाईं मात्र यो पूर्ण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईं टाइमटेक समाधानको साथ टाइमटेक TA वा टाइमटेक छोड्ने जस्ता सदस्यता लिनुहुन्छ।
11. TimeTec छोड्ने कार्यान्वयनको लागि आवश्यक समय के हो?
यो तपाईंको कम्पनी कति कम्पनीमा छ र तपाइँको छोड नीति, अभिलेख नियम, प्रतिबन्ध र आदि कसरी जटिल छ, निर्भर गर्दछ कि तपाईं यसलाई घडीको कुरामा वा ठूलो संगठनको लागि यो लामो समय लाग्न सक्छ। तपाईलाई चिन्ता छैन किनकि टाइमटेक समर्थन टीम सधैँ तपाई संग सहयोग गर्न त्यहाँ हुनेछ।
1. TimeTec चार्ज गर्ने तर्क भनेको व्यावहारिक लागत घटाउन प्रयोगकर्ताहरूको सही संख्या द्वारा लाइसेन्स गिनको सट्टा 10 प्रयोगकर्ताहरूको ब्लकद्वारा छोडिदिनुहोस्।
कर्मचारी कारोबार कहिल्यै स्थिर छैन र सँधै कम्पनीमा परिवर्तन गर्दछ। प्रत्येक नयाँ भर्तीको लागि व्यक्तिगत इजाजतपत्र चार्ज गर्न को लागी जटिल छ किनभने तपाई टाइमटेक छोड्ने लाइसेन्स सब्सक्राइबमा जानुहोस् र प्रणालीमा दर्ता गर्न सक्नु अघि भुक्तानी प्रक्रिया वा तपाईलाई प्रयोगकर्ता लाइसेन्स रद्द गर्न आवश्यक छ। को इस्तीफा गरे। प्रयोगकर्ता प्रयोगकर्ता इजाजतपत्र प्रति ब्लकमा 10 प्रयोगकर्ताहरू चार्ज गर्ने बेलामा कुनै कम्पनीले कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्न केही अतिरिक्त इजाजतपत्रहरू निश्चित गर्नेछ। TimeTec छोड्ने लाइसेन्स सदस्यता शुल्क प्रति महिना USD2 प्रति प्रयोगकर्ता मात्र हो, बजारमा तुलनात्मक तल्लो, र समूहका इजाजतपत्रहरूको एक इकाईको रूपमा कम्तीमा 10 प्रयोगकर्ताहरू हाम्रो लगानी र तपाईंको लागि उच्च गुणस्तर र विश्वसनीय प्रणाली प्रदान गर्न प्रतिबद्धता प्रदान गर्न मात्र।
2. यदि मेरो कम्पनीमा एक वर्षको सदस्यता बिलिङ चक्र छ र वर्षको मध्यमा, हामी केहि नयाँ कर्मचारीहरू भागेछौँ र हामी अतिरिक्त प्रयोगकर्ता इजाजतपत्रहरू चलाउँथ्यौं, के म नयाँ प्रयोगकर्ता समूह इजाजतपत्र खरीद गर्न सक्छु र अझै पनि मेरो बिलिङ चक्रसँग सिङ्क गर्न सक्छु?
3. के मेरो नि: शुल्क परीक्षण डेटा मेरो सेटअप खातामा हस्तान्तरण गरिएको हुन सक्छ प्रणाली सेट अप र डेटा प्रविष्टिमा दोहोरो कार्यमा बचत गर्न?
4. के प्रणालीले कर्मचारीको अनुमति लिई र सन्तुलनको आयातलाई समर्थन गर्छ?
हो। तपाईले हालको छोटो लिईएको र ब्यालेन्स आयात गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई xls फाइल प्रयोग गरेर टाइमटेकमा आयात गर्नुहोस्।
1. टाइमटेक टाइमटेक टीए को रूप मा एक नै क्रेडेंशियल संग पहुँच योग्य हुन सक्छ?
तपाईं समान मालिक खाताको साथमा दुवै टाइमटेक टीए र टाइमटेक छोड्नको लागि सदस्यता लिन सक्नुहुनेछ। परीक्षण प्रशासकको मेरो खाता सेटिङ्हरूमा कम्पनी> कम्पनी खाता अन्तर्गत सक्रिय हुन सक्छ। प्रयोगकर्ताहरू दुवै अनुप्रयोगहरूको लागि समान लगइन प्रमाणपत्रहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछन्।
2. के हामी टाइमटेक टीए र टाइमटेक छोड्न सक्दछ भने हामी कम्पनी र प्रयोगकर्ता जानकारी साझेदारी गर्न सक्नेछौं?
निश्चित रूपमा! कम्पनी जानकारी, संगठन संरचना, छोड्नुहोस् यी दुई अनुप्रयोगहरू भित्रका प्रकारहरू साझेदारी गरिनेछ, त्यसैले तपाईंलाई फेरि सेट गर्न छैन। यद्यपि, प्रयोगकर्ता खाताको लागि, तपाईले तपाइँको प्रणाली प्रयोगकर्ताहरूलाई सही अनुप्रयोगमा असाइन गर्न आवश्यक पर्दछ उनीहरूको समाधानको लागि सक्षम हुन।
3. टाइमटेक मार्फत लागू गरिएका पत्तिहरू कर्तव्य रोस्टरमा प्रतिबिम्बित हुनेछ र टाइमटेक टीएमा कन्फिगर कार्यक्रमहरू?
हो, अनुमोदित पातहरू टाइमटेक TA को रोजटर अवलोकनमा देखिन सक्नेछन्; वेब र मोबाइल अनुप्रयोगमा।
टाइमटेक अनुप्रयोग एप मोड्युलमा प्रश्नहरू (प्रयोगकर्ता बिन्दु)
1. पाइ चार्टले गृहपृष्ठमा के प्रतिनिधित्व गर्दछ र यसले मेरो छोड सन्तुलन अनुसार परिवर्तन गर्नेछ?
पाइ चार्टले तपाईंको वर्षको सबै छोटो प्रकारको लागि तपाईंको छुट भत्ता भत्ता प्रतिनिधित्व गर्दछ। प्रत्येक प्रयोगको छोरो तपाईंको ब्यालेन्सबाट कटौती गरिनेछ र तपाईंको वर्तमान ब्यालेन्स पाई चार्ट अनुसार तदनुसार गरिनेछ।
2. के म सिधै अनुप्रयोगको होमपेजबाट छुटाउन सक्छु?
हो। पृष्ठको शीर्ष दायाँ भागमा + प्रतिमा ट्याप गर्नुहोस्। तर, तपाईंको स्मार्टफोनमा टाइमटेक छोड्ने अनुप्रयोग प्रयोग गर्न यो अधिक उपयुक्त हुनेछ। यदि तपाईंले एक स्थापना गर्नुभएको छैन भने, अहिले यो गर्ने सही समय हो। एप आईओएस र एन्ड्रोइडमा उपलब्ध छ, केवल टाइम टेक छोड्नुहोस् र निःशुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्।
3. एप्स भित्र एक क्यालेन्डर प्रकार्य छ, जहाँ म सबैजनाको छोरोको सिंहावलोकन गर्न सक्छु?
क्यालेन्डर प्रकार्य टाइमटेक छोड्ने अनुप्रयोगको दोस्रो संस्करणमा उपलब्ध हुनेछ। TimeTec छोड्न को प्रत्येक व्यक्ति को लागि अलग पहुँच स्तर को लागि डिजाइन गरिएको छ ताकि तपाईं केवल आफ्नो पहुंच स्तर को आधार मा हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि तरिका, हामी तपाईंलाई चाँडै क्यालेन्डर प्रकार्यमा अपडेट राख्नेछौं र ट्यूनिंगमा रहनेछौं!
4. मैले मेरो सबै पातहरू खर्च गरेपछि के हुनेछ?
तपाइँलाई कुनैपनि थप छोडको लागि आवेदन गर्न अनुमति छैन। यद्यपि, तपाईं अझै पनि अनपेक्षित पत्तिको लागि आवेदन गर्न सक्नुहुनेछ, जुन छोटो प्रकारको छनोटमा उपलब्ध छ, र यो पनी अन्य प्रकारका रूपमा अनुमोदन प्रक्रिया जान पर्छ।
5. के मैले टाइमटेक छोड्ने अनुप्रयोगबाट खाता सेटअप गर्न सक्छु?
खाताको सेटअप केवल वेब पोर्टलमा गर्न सकिन्छ किनभने त्यहाँ धेरै विवरणहरू छन् जुन प्रशासकलाई नियन्त्रित गरिएको बेलामा कुनै पनि त्रुटि लाग्नको लागी प्रशासकलाई आवश्यक पर्दैन। त्यसैले, सेटअप सिफारिस गरिएको छ सानो स्क्रिनमा सानो स्क्रिन स्मार्टफोनको सट्टा कम्प्युटर जस्तै।
6. के मैले आफ्नो प्रोफाईल तस्वीर वा कुनै अन्य जानकारी जस्तै टाइमटेक छोड्ने अनुप्रयोग भित्र ठेगानाहरू परिवर्तन गर्न सक्छु?
प्रोफाईल जानकारी परिवर्तन गर्न केवल प्रशासकद्वारा गर्न सकिन्छ किनभने टाइमटेक छोड्ने कम्पनीको प्रणाली हो र टाइमटेक छोड्ने सबै जानकारी तपाईंको रोजगारको रेकर्डमा जानकारी पालन गर्नु पर्दछ। सूचनाको कुनै पनि परिवर्तन मानव संसाधन र तपाईंको श्रेष्ठको अनुमोदनको माध्यमबाट जानुपर्दछ।
7. के म आफ्नो पासवर्ड टाइमटेक छोड्ने अनुप्रयोगमा परिवर्तन गर्न सक्छु?
पासवर्ड पासवर्ड फिचर टाइमटेक छोड्ने अनुप्रयोगको दोस्रो संस्करणमा उपलब्ध हुनेछ। अहिलेको लागि, तपाईं वेब मार्फत आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंलाई हालको विकासमा अद्यावधिक राख्नेछौं। घनिष्ठ रहनुहोस्!
8. के तपाईंको एप स्वीकृति छिटो प्राप्त गर्न को लागी मैले एप भित्र केहि गर्न सक्छु?
अँ साञ्ची! तपाइँ आफ्नो अनुमोदन अनुप्रयोग विवरण पृष्ठ मा बज्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको स्वीकृति तुरुन्त सूचित गरिनेछ। यद्यपि, यदि ढिलाइ तपाईंको अनुमोदनको कारणले गर्दा, प्रणालीले गर्न सक्ने कुनै पनि प्रणाली छैन तर तपाइँले प्रक्रियालाई गति दिनको लागि व्यक्तिगत रूपमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ।
9. के मेरो स्वीकृति / खारेज गरिएको छ भने मलाई कुनै अधिसूचना प्राप्त हुनेछ?
हो। तपाईंको छोटो अनुमोदन वा अस्वीकृत भएपछि तपाईले अनुप्रयोग र ईमेल अधिसूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ।
10. के मैले अनुप्रयोगबाट बाहिर निस्कन भने मलाई अझै सूचना दिन्छु?
हो। जबसम्म तपाईंको मोबाइल इन्टरनेटमा जोडिएको छ, तपाईंले तिनीहरूलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ।
टाइमटेक मा प्रश्न छोड्नुहोस् वेब मड्यूल (व्यवस्थापक बिन्दु)
1. टाइमटेक छोड्ने अनुप्रयोगले (पहिले नै लगिन लगइन) काम गर्दै रोकिएको बेलामा मैले टाइमपास वेब साइटमा आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन गरे। के यो सामान्य हो? यदि त्यसो भए, मैले के गर्नु पर्छ?
हो। यो एपको सुरक्षा प्रमाणिकरणको कारण हो। अन्य शब्दहरूमा, एपले पत्ता लगाउँछ कि तपाईंको पासवर्ड परिवर्तन भएको छ र अनुप्रयोग भित्र लगइन रहनको लागी, तपाईले तपाइँको नयाँ पासवर्ड घुसाउनु पर्छ।
2. टाइमटेकमा पासवर्ड परिवर्तन गर्नाले मैले अन्य सदस्यताहरू प्रभावित गरेको छु, मैले टाइमटेक टीए जस्तै सदस्यता लिने?
हो। टाइमटेक समाधान प्रयोगकर्ता प्रमाणीकरणको लागि एकल साइन इन विधि प्रयोग गर्दैछ। त्यसैले, तपाइँले कुनैपनि अनुप्रयोगमा तपाइँको पासवर्ड परिवर्तन गर्नुभएपछि, यो अन्य अनुप्रयोगहरूमा पनि असर पर्नेछ।
3. के प्रयोगकर्ताले हेर्न सक्दछ प्रशासकले टाइमटेक भित्र पस्न सक्छ भन्ने कुरामा के हो?
होइन। प्रशासकले स्वीकृति मोड्युल हेर्न सक्षम हुनेछ जुन प्रयोगकर्तालाई पहुँच गर्न अनुमति छैन।
4. टाइम टेक छोडेर प्रशासक र प्रयोगकर्ताको खाता बीचको भिन्नता के हो?
प्रशासकले कम्पनी छोड्ने सेटिङहरू सेटअप गर्न सक्षम बनाउनेछ, प्रयोगकर्ताको छुट भत्ताहरू संशोधन गर्न, ब्यालेन्स, आदि। साथै, यदि व्यवस्थापक पनि अनुमोदनकर्ताको अनुमोदन मध्ये एक हो भने, त्यो अनुमति अनुमोदन गर्न सक्षम हुनेछ। अर्कोतर्फ, टाइमटेक छोड्ने प्रयोगकर्ताले मात्र अनुमति / रद्द रद्द गर्न सक्नेछ, उनीहरूको अनुमति भत्ताहरू र शेष, पात्रो आदि हेर्नुहोस्।
5. Add Leave Type को तहत कटौती योग्य / गैर-कटौती योग्य र भुगतान / अनपेक्षित सेट को विकल्प किन छ? सर्तहरू लगभग एकै अर्थको अर्थ होइन?
कटौती योग्य छुट्टी छ जहाँ तपाईंको छोटो निश्चित मात्राको सन्तुलन समावेश छ, जस्तै वार्षिक छुट्टी। गैर कटौती योग्य छुट्टी एक प्रकारको छोटो हो जुन सन्तुलन रकम समावेश गर्दैन, जस्तै मातृत्व छोड। कम्पनीको नीतिको आधारमा, तपाइँ त्यसो गर्न सेट गर्नुभएको भुक्तानीलाई भुक्तानी वा अनपेड गरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ। साधारण उदाहरणलाई हेर्दा: एक कम्पनीसँग आपातकालीन छोड्ने रकमको आधारमा सीमा छ त्यसैले आपातकालीन छोड्न कटौती योग्य छ र अनपेडको रूपमा लेबल गर्न सकिन्छ। तथापि मातृभाषा छोड्न, गैर-कटौतीयोग्य र भुक्तानी छोडिएको माना जाता छ।
6. Add Leave Type को तहत रंग संदर्भ को प्रकार्य के हो र किन यो यति महत्त्वपूर्ण छ?
जब तपाईं होमपेज पाई चार्ट र क्यालेन्डर देख्नुहुन्छ यो रंग सजिलो संदर्भको उद्देश्यको लागि हो।
7. मैले छोड्ने सेटिङहरू अन्तर्गत प्रस्तुत गरेको गल्ती देखेको छु, के मैले गल्ती गल्ती सम्पादन गर्न सक्छु र कार्य तुरुन्तै प्रभाव पार्नेछ?
हो। सबै सम्पादन सेटिङहरू बचतमा तुरुन्तै प्रभाव पर्नेछ।
8. यदि मेरो गल्ती मेटिएको छ भने मेरो सेटिङहरू छोड्ने सेटिङहरूमा अन्डो गर्न कुनै पनि तरिका छ?
दुर्भाग्यवश, नहीं। तपाईंले छोड्ने प्रकार वा नीति छोड्ने नीति फेरि हुनेछ। कृपया ध्यान राख्नुहोस् कि तपाई केहि चीजलाई मेटाउदा पुष्टिकरण सन्देशलाई संकेत गरिनेछ।
9. मैले छुट्टै ट्याबमा आयात आयोट देखेको छु, के यो वास्तवमा कार्य गर्दछ र के यो हरेक देशमा लागू गर्दछ?
तपाईले छुट्टै छुट्टै बिस्तारहरू आयात गर्नुभएको छ जुन हामी तपाईंको देशमा आधारित छौँ र यसले तपाईंलाई मैन्युअल रूपमा थप्न समय बचत गर्दछ। थप रूपमा, हामी सूची अद्यावधिक गर्न निकै कठिन छ।
10. म म्यानुअल रूपमा छुट्टै अवधि सेट गर्न सक्छु यदि म आयात अवकाश समारोहमा निर्भर गर्न चाहँदैन?
हो। बस मिति (हरू) को चयन गर्नुहोस् र छुट्टीको नाम घुसाउनुहोस्।
1. टाइमटेकले मेरो छोटो डेटालाई कति छोडिदिन्छ?
टाइमटेक तपाईंको छोटो डेटा को5वर्ष को लागी राख्छ; लाइभ डेटा2वर्षको अवधिमा उपलब्ध छ, र यस अवधि पछि सबै डेटा पुरातत्व3वर्ष सम्मको लागि अभिलेखमा सारिनेछ। ध्यान दिनुहोस् कि तपाईं डेटा भण्डारण विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ 1,2वा3वर्षको लागि न्यूनतम शुल्क सहित। अभिलेख डेटा समर्थन> संग्रहमा उपलब्ध छ।
2. TimeTec कसरी मेरो डेटा5वर्ष भन्दा लामो छ भनेर छोड्नुहुन्छ?
छोड डेटा दैनिक आधारमा पिग्रेको छ। उदाहरणको लागि यदि आज 2018-1-1 हो, 2012-12-31 मा छोटो डेटालाई हटाइने छ र दिनभरि जान्छ,5वर्ष अघिको डाटा स्वचालित रूपमा दिनभरि खडा हुनेछ।
3. के म म्यानुअल रूपमा मेरो छोटो डेटा ब्याकअप गर्न आवश्यक छ?
तपाईंको छोड डेटा हाम्रो सर्भरमा5वर्ष सम्मको लागि सुरक्षित राखिएको छ, तर हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईं आफ्नो डाटाको लागि5वर्ष भन्दा माथिको संग्रह अभिलेख राख्नुहोस्। नोट गर्नुहोस् कि तपाईं छोड डेटाबाट रिपोर्ट बाट निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको स्थानीय पीसीमा भण्डारण गर्न सक्नुहुनेछ।
4. म कसरी छोटो डेटा भण्डारण अवधि विस्तार गर्न सक्छु?
तपाईं अतिरिक्त डेटा भण्डारण अवधि 1,2वा3वर्षको लागि 'एक्सटेन्ड डाटा स्टोरेज अवधि' मा क्लिक गरेर सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ (खाता मालिक वा बिलिङ व्यवस्थापकको लागि मात्र लागू)। नोट गर्नुहोस् कि शुल्क संग्रहित वर्ष र विस्तारको अवधिमा उपलब्ध प्रयोगकर्ताहरूको संख्यामा आधारित हुनेछ।
डाटा भण्डारण एक्सटेन्सनको लागि मूल्य निर्धारण यो लिङ्कमा उल्लेख छ। https://www.timetecleave.com/pricing_order